Safiirka cusub ee Mareykanka oo qaadey tallaabadii ugu horeysay | KEYDMEDIA ENGLISH
Safiirka cusub ee Mareykanka oo qaadey tallaabadii ugu horeysay
Waa safiirkii 3aad oo tan iyo 2016 dowladda Mareykanka usoo direyso dalka Soomaaliya, oo hadda ku leedahay Safaarad, taasoo taalla Xalane.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Arrimaha Dibadda Cabdisaciid Muuse Cali, ayaa maanta nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga danjirenimo ka guddoomay Safiirka Cusub ee dowladda Maraykanku u soo magacowday Soomaaliya Larry André.
Waxay labada dhinac ka wada hadlay xoojinta xiriirka labo geesoodka ah iyo iskaashiga Labada Dowladood ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, horumarinta, iyo diblomaasiyadda, isagoo Danjire André soo bandhigay dadaalka uu ku bixin doono adkaynta xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka.
Waa tallaabadii ugu horeeyay oo Safiirka Mareykanka qaado iyo markii uu yimid Muqdisho maalmo kahor, waxaana lagu wadaa in tallaabada xigta ay noqoto inuu warqadaha aqoonsiga u gudbiyo Farmaajo.
Lama oga inuu tagi doono Villa Soomaaliya, maadaama danjirihii isaga ka horeeyay Yammamoto loogu tagi jiray Safaaradda, isagoo weligiisa cabsi darteeda aan u tagin KM4 mudadii saddexda sano ee uu joogay Muqdisho.
Mareykanka ayaa dowladda Soomaaliya aqoonsaday 2013 xili Obama, oo Xasan Sheekh xukunka hayay, waxaana Washington ka leedahay dalka dano amni, oo ay kula dagaalamayso Al-Shabaab, oo khatar ku ah maslaxadeeda mandiqada Bariga Afrika.